Budada Raw Fasoracetam (110958-19-5) Soosaarayaasha - Phcoker
Budada Fasoracetam waa mid cusub oo rajo leh oo nootropic ah oo loo soo saaray sidii daaweyn ADHD ah. …… ..
Capacity: 1570kg / bishii
Qalabka Raw Fasoracetam (110958-19-5) video
Dufanka fasalka Fasoracetam waa farsamo cusub oo xoog leh oo hoos u dhac ku yimaada qaybta hoose ee nootropics oo loo yaqaan cunsuriyada. Waa derisyo budhcad-badeed ah, hase yeeshee, saameynaha garashada waxa uu ka xoog badan yahay budhcad-badeeda. Waxa kale oo ka badan anti-amnesiac ka badan piracetam, oo waxay u dhaqmaan sida habdhiska nidaamka dareenka. Dufanka Fasare Fasoracetam waa kor u kaca korriinka sare ee korriinka iyo kordhiya waxqabadka nitric oxide synthase ee kortex maskaxda.
Dufanka Fasal Fasoracetam (110958-19-5) Smamnuucista
Product Name Root Fasoracetam budada ah
Magaca Kiimikada (5R)-5-(piperidine-1-carbonyl)-2-pyrrolidone;(5R)-5-(piperidine-1-carbonyl)pyrrolidin-2-one;(5R)-5-piperidin-1-ylcarbonylpyrrolidin-2-one;
brand NAme Root Fasoracetam budada ah
Fasalka Daroogada nootropics
Molecular Wsideed 196.248
karisaaning Psaliid 456.8 ° C at 760 mmHg
SOlubility Horumarinta biyaha waa 50mg / ml at 25 Celsius.
Root Fasoracetam budada ah Application Hirgelinta Horumarinta iyo Xasuusta
qaydhiin Fasoracetam budada (110958-19-5) Tafaasiisha
Fasoracetam Powder waa unug nootropic ee qoyska racetam ee nootropics. Racetams waxa uu ka koobanyahay kooxo badan oo xayawaanno kala duwan ah, oo wax laga beddelay qaybta waalidka Piracetam, oo laga helay 1960s
Waxaa hadda la horumarinayaa sida daaweynta aan ADHD ahayn ee aan suuragal ahayn. Daraasadaha bani-aadmiga ee dadweynaha ee fasoracetam ayaa xaddidan laakiin waa mid wanaagsan, taasoo muujineysa inay si waxtar leh uula dhaqmi karto qaab gaar ah ee carruurnimada ADHD. Daraasaadka xayawaanka iyo caddaymaha anecdotal ee ka imanaya isticmaalayaashu waxay soo jeedinayaan in ay sidoo kale sii wanaajin karto xusuusta, hagaajinta hurdada, yaraynta walwalka iyo niyad-jabka, iyo in la yareeyo astaamaha ka-noqoshada daawooyinka kale.
Sidee Fasoracetam budada (110958-19-5) shaqeeyaan?
Ma jiraan wax caddayn ah oo la xidhiidha sida budorka xayawaanka fasoracetam u shaqeeyso si loo hagaajiyo garashada, si kastaba ha ahaatee, waxaa la aaminsan yahay in la isku habeeyo wax soo saarka iyo sii deynta glutamate, GABA, iyo acetylcholine, saddex ka mid ah maskaxda ugu weyn ee maskaxda.
Qawaaniinta GABA (B) ee lagu falanqeynayo faa'iidooyinka ayaa ah qaab kale oo ficil ahaan loogu talagalay fal-celinta niyadjabka iyo waxtarka walaaca, laakiin macluumaad dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo fahmo sida fasoracetam u shaqeeyo ee ku saabsan sameynta xusuusta iyo kicinta
Faa'iidooyinka of Fasoracetam budada (110958-19-5)
Hagaajinta Xusuusta iyo Aqoonsiga Guud
Diidi Walaaca iyo Niyadjabka
Daweynta ADHD ee suurtogalka ah
Ka yareyn kara ka laabashada daroogooyinka kale
talinayo Fasoracetam budada (110958-19-5) Qiyaasta
Ma jirto qiyaas qiyaaseed oo fasoracetam ah oo loogu talo galay dadka. Caddaymaha anecdotal waxay soo jeedinayaan qiyaaso yar oo kala duwan oo kudhisan 10 - 15 oo leh qiyaaso waaweyn oo ah 30 - 50 mg kasta oo adeega saddex jeer maalintii.
Dhibaatooyinka ay keento of Fasoracetam budada (110958-19-5)
Budoracetam budada waxay u muuqataa inay tahay mid ammaan ah oo si macquul ah u dulqaadan karta marka ay si masuuliyad leh u qaadaan dadka caafimaadka qaba.
Waxyeellooyinka ugu badan ee la soo sheegay ayaa la mid ah kuwa kale ee aanotropics ee qoyska cunsuriga ah: daal iyo khafiif ah, dareenka dheefshiidka, iyo madax xanuun.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay soo sheegaan hoos u dhaca libido iyo yaraynta orgasmska marka ay qaadanayaan budada fasoracetam
Ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan isdhexgalka gaarka ah ee u dhaxeeya fasoracetam iyo daroogooyinka kale, hase yeeshee waxaa laga yaabaa in ay xoogga saaraan phenibut.